ho ato, ataon`ireo haino aman-jery manohitra ny fitondrana sasany haza lambo ireo minisitera izay tsy mitovy firehana politika aminy. Misy mpanolotsaina tsy manao afa-tsy manenjika fotsiny izay minisitra tsy Mapar ary tsikeraina mafy ny TIM sy HVM. Akaiky tokoa ny fifidianana ka tsy vaovao intsony ity fomba fiasa ataon’ireo mpanolotsaina, indrindra ireo misehatra amin’ ny serasera. Midika izany fa misy ireo mpanao politika ankehitriny efa tsy marim-pototra intsony fa manao izay hahazoana tombontsoa azy ireo samy irery no tadiaviny. Manimba tanteraka ny firenena anefa io fomba fanao politika io. Hatahorana ho rava ilay firaisankinan`ny governemanta raha izao no mitohy. Ny praiminisitra Ntsay Christian rahateo tsy ahenoana teny manoloana ny zava-misy. Inona ny asa hirindra amin`izany ? Ahoana no hanatanterahana fifidianana ao anatin`ny enim-bolana raha tsy miray hina ireo mpikambana ao anatin`ny governemanta ? Ireo mpanolotsaina ireo tokoa no mety ho fositra amin`ny tsy hahalavorary ny fifidianana ka hanaratsy ny hafa ka hanosopotoka ireo asa izay efa ezaka vita sy natsangana. Andrasana noho ny fanadiovana.